Tendry gitara: hiaraka an-tsehatra i Joro sy Anjara | NewsMada
Mikoriana ao anatin’ny ra ny mozika, ho azy mirahalahy. Tsy vitan’izay fa samy mpitendry gitara i Joro sy Anjara Rakotozafiarison. Na izany aza anefa, samy manana ny mampiavaka azy, ny gadona sy ny mozika fitendriny ihany koa izy mirahalahy ireto. Ankoatra ny sehatry ny fetim-pianakaviana, sambany hiaraka hilalao an-tsehatra i Joro sy Anjara.
Manome fotoana ireo liana sy mpankafy ny mozika an-gitara izy ireo, ny zoma alina izao, etsy amin’ny Hôtel de l’Avenue Analakely. Hiezaka hampitovy tandin-dokanga, na dia mirona kokoa amin’ny jazz aza i Joro, raha toa ka milalao ny rock i Anjara. Ny fanehoana izay fahasamihafana amin’ny fironana ara-mozika izay indrindra no hitan’ny zokin’izy ireo iray, ka nampitsiry ny hevitra. Araka izany, hifangaro mandritra io fotoana io ireo sanganasan-dry Sting, Neil Young, Pink Floyd, sns, hifanjohy amin’ny an-dry Pat Metheny,sns. Na izany aza, manana ny sanganasany ihany koa izy mirahalahy ireto.
Tsiahivina fa samy efa avy nisongadina tamina fifaninanana, satria nahazo ny voalohany tamin’ny “Tremplin Madajazzcar” i Joro, ny taona 2013 niaraka tamin’ny tarika Jazz Quart, raha toa ka voalohany tamin’ny “Grande ile guitar talent” i Anjara.